Sakafom-pifaliana voalohany noho ny faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo – FJKM Ambavahadimitafo Sakafom-pifaliana voalohany noho ny faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo |
Sakafom-pifaliana voalohany noho ny faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo
Publié le 16 mai 2014 à 08:05
Amin’ny alahady 18 mai 2014 ho avy izao no hanatanterahina ny sakafom-pifaliana
eny amin’ny CEMES Soanierana, iza tafiditra indrindra ao anatin’ny fankalazanan ny faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo.
Ity fotoana ity tokoa no sakafom-piraisana voalohany nokarakaraina noho izao faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo. Koa dia manentana antsika ny komity amin’ny fandraisana anjara satria anisan’ny hetsika lehibe ho fitadiavam-bola ho fanavaozana ny tsangambato, dia ny Akany Ralibera Daniel izao hetsika izao.
50 000Ar no saran’ny tapakila amin’izany ary hisy orkestra matianina hanentana antsika amin’izany. Marihina fa tsy hisy ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola amin’io fotoana io fa divay kosa no hoaroson’ny komity.